Xildhibaanno iyo saraakiil ciidan oo kala dhex galay maleeshiyaad hubeysan | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaanno iyo saraakiil ciidan oo kala dhex galay maleeshiyaad hubeysan
Maleeshiyo beeleedyo hubeysan oo ku dagaallamay degaanno ka tirsan Galgaduud ayaa lakala dhex galay kaddib markii ay israsaaseeyeen.
BAXDO, Soomaaliya - Ciidamada Amaanka Dowlada Federalka Iyo Galmudug, Xildhibaano ka tirsan Barlamaanka Galmudug ayaa ku guuleystay kala qaadista maleeshiyaas uu dhexbmaray dagaal khasaaro geystay kaas oo ka dhacay duleedka deganaka Baxdo Gaabo ee Gobolka Galgaduud.
Dagaalka ayaa dhex maray labo maleeshiyo beeleed oo Cadaado iyo Gaalkacyo kasoo kala jeeda iskuna haya lahaanshaha dhul deegaan ah oo udhaxeeya labada beelood.
Laba kamida dhinacyadii ku dagaallamay halkaas ayuu soo gaaray dhaawac mid kamida xaaladdiisa caafimaad ay liidato, waxaana laga dhex billaabay hadda waan-waan udhaxaysa maleeshiyaadka iyo reeraha daga goobta lagu dagaallamay!
Degaanada Galmudug ayaa baryihii udambeeyay la daalaa-dhaceysay dhibaatooyin isugu jira dagaal beeleedyo udhaxeeya maleeshiyaadka hubeysan ee reer miyiga ah iyo weerarro ka imaanaya kooxda Al-Shabaab oo kusoo badanaya qabsashada degaanno hor leh oo Galmudug ka tirsan.